#Madagascar : Taksibe nanao alasafay | ONG Lalana Blog
#Madagascar : Taksibe nanao alasafay
Samy nisedra olana tamin’ny famonjena fodiana noho ny fitohanana diso tafahoatra na ireo fiara avy aty an-drenivohitra na ireo avy any Ambohibao sy Andranomena. Tsy tody hatrany amin’ny faran’ny lalany ny taksibe ao amin’ny zotra 114 sy 112 ny asabotsy teo. Nifandrombahana ireo fiara ka nijaly ny mpanjifa.
Fanararaotana sy hafetsena nampijaly. Olona maro no tazana nitangorona tamin’ny toeram-pian-tsonana maro andalovan’ny zotra 114 sy 112 mampitohy an’Analakely amin’Ambo­hibao sy Andranoro na Moron­dava ary Ambatolampy ny asabotsy teo. Ny fanovan’ny taksibe ny lalany no nahatonga izany. Lasa nifandrom­bahana izay taskibe mihazo an’Ambohimanarina nandalo nanomboka tamin’ny 4 ora tolakandro, vokatr’izany sy ny harerahana nateraky ny fiandrasana ela ny fiara.
Fitohanan’ny fifamoivoizana noho ny fahasimban’ ny lalana eo anelanelan’ Imerinafovoany sy Ambohibao no fototr’izany rehetra izany. Lavareny tokoa ny fitohanan’ny fifamoivoizana satria aty Antanimena sy eny Andohatapenaka no efa manomboka izany. «Mahafaty antoka anay ny mankany Ambohibao nanomboka ny zoma satria maharitra ela ny fitohanana. Fotoana tokony hahavitanay mitatitra olona mandroso sy miverina indroa no lany amin’ny dia iray. Ny volan’ny tompon’ny fiara anefa tsy maintsy henjehina, ka izany no tsy mahatonga anay any amin’ny toeram-piantsonana farany», raha ny fanazavan’ireo mpamily taksibe ao amin’ny zotra 114 sy 112.
Isan’ny tsy nihodina an-dalana ihany koa ny taskibe ao amin’ny zotra D mampitohy an’i Vasakaosy amin’Ivato sy Ambohidratrimo.
«Marina fa mahafaty antoka ny fisian’ny fitohanan’ny fifamoivoizana vokatry ny fahasimban’ny lalana, kanefa tokony hotsinjovina foana ireo olona mila taksibe. Isan’ny azo atao ohatra ny mandritra ny fitateram-bahoaka ka zaraina roa ireo taksibe miasa izay mihaona eo Andranomena», hoy Ramaro­lalaharisoa Vola, renim-pianakaviana andeha hamangy olona marary teny Ambohibao ka niharitra fiandrasana taksibe ela tetsy Antanimena. «Rehefa tsy handray andraikitra hanamboatra ny lalana ny fanjakana dia tokony hanatevina ny isan’ny mpitandro ny filaminana handrindra ny fifamoivoizana», hoy kosa Andriamirija Michaël, maika hitsena ny reniny avy any ampita teny amin’ny seranam-piara­manidin’Ivato.
Ny tsy mbola fisian’ny ny tetibola no voalazan’ny ao amin’ny minisiteran’ny Asa vaventy sy ny famantarana ny toetry ny andro ho tsy mbola ahafahana manamboatra io lalana eny Ambohi­bao io.